News - Amazons Ngwá Ọrụ Ogo akwụkwọ ikike
# Akwụkwọ ikike
Afọ 3 mkpuchi
Mgbe-Sales Services & Ego Back nkwa
Biko rụba ama: akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi ụma mmebi anụ ahụ, oke mmiri, ma ọ bụ mbibi ụma.
* Tụkwasị na nke a, anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa anyị niile ga-arụ ọrụ mgbe ị nwetara ha belụsọ ma ekwuru ya. Afọ ojuju gị dị anyị mkpa, yabụ ọ bụrụ na ngwaahịa gị bụ DOA (Nwụrụ Anwụ Na-erute), mee ka anyị mara, ma weghachitere anyị ya n’ime ụbọchị iri atọ nke ụbọchị ịzụta. Anyị ga-ezitere gị onye nnọchi anya ozugbo anyị natara ihe ị laghachiri (A ga-akwụghachi ụgwọ akwụ ụgwọ iji weghachite ihe ndị ahụ. Anyị ga-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ izipu nnọchi ahụ).
* Akwụkwọ ikike agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na ejiri ngwaahịa eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, na-ejikwa ya, ma ọ bụ gbanwee n'ụzọ ọ bụla.
* Feesghaghachi ụgwọ nwere ike ịbụ na ikpe nke nkwụghachi n'ihi mgbanwe nke uche. Maka ndị na-azụ mba naanị
* Ọrụ mbubata, ụtụ isi, na ụgwọ adịghị etinye ọnụahịa ihe ma ọ bụ ụgwọ mbupu. Ebubo ndị a bụ ọrụ onye na-azụ ahịa. * Biko lelee ụlọ ọrụ kọstọm nke mba gị iji chọpụta ihe ụgwọ ndị a ga-abụ tupu ịkwado ma ọ bụ ịzụta.
* Nhazi na Ijikwa ụgwọ maka nloghachi bụ ibu ọrụ nke onye zụrụ ahịa. A ga-eweghachi nkwụghachi ozugbo enwere ike ịme ya ma nye onye ahịa ahụ ozi email. Nkwụghachi ụgwọ metụtara naanị ego nke ihe Nkwupụta
Ọ bụrụ n ’ị masịrị gị ịzụrụ, biko kọọrọ gị ndị ahịa ndị ọzọ ahụmịhe gị ma hapụ anyị nzaghachi ziri ezi. Ọ bụrụ n ’afọ ojuju ịzughi gị n’ ụzọ ọ bụla, biko buru ụzọ gwa anyị okwu!
Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka idozi nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ọnọdụ a chọrọ ya, anyị ga-enye nkwụghachi ma ọ bụ nnọchi.
Anyị na-anwa inyere ndị ahịa anyị aka idozi nsogbu ọ bụla n'ime oke oke.
Dabere na ọnọdụ ahụ, anyị ka nwere ike ịnweta arịrịọ ikike
Post oge: Sep-15-2020